site na nchịkwa na 21-07-13
Ala bụ ihe eji eme ụlọ nke anaghị adị mfe ịmehie na imewe yana dabara, yana enwere nhọrọ nke ihe ndị ọzọ dị n'ala, yabụ taa a ga m akpọrọ gị ka ị ghọta ụdị ala dị. Edemede a na -enyocha ala anọ bụ isi: Ejiri osisi siri ike rụọ ...
A na-ekwukarị na ụlọ nrụpụta ụlọ na ala ụlọ osisi bụ “ala nwere ntụpọ atọ na ntinye isi asaa”, ya bụ, nrụnye dị mma ma ọ bụ na-ekpebi 70% nke ịdị mma ala. Iji ala eme ihe na -adịghị mma bụ ihe kpatara ya ...
Gọzie ala nne ọganiru na ọganiihu! 2021 bụ ncheta afọ 100 nke ntọala Kọmunist nke China. ...
Unilin na -ewepụta mkpuchi mmiri na -adịghị na ya Unicoat – News Floor
June 9, 2021 [Belgium] Unilin Teknụzụ kwupụtara na mkpuchi mmiri nke ala “Unicoat” bụ ihe ọhụrụ patent ọhụrụ na Pọtụfoliyo patent ya. Companylọ ọrụ ahụ kwuru na mkpuchi mkpuchi mmiri Unicoat bụ ihe nchebe kachasị megide ntopute mmiri ma gbochie mmebi nke flo ...
N'ihe dị ka Jenụwarị afọ a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eduga abanyela nkwekọrịta ngosi na ihe ngosi ahụ. Agbanyeghị, mgbe ọrịa ntiwapụ ahụ gasịrị, DOMOTEX ASIA kwetara ka ebigharị ihe ngosi ahụ ruo n'afọ na -esote, nke butere ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eduga na exh nke afọ a ...